Tilmaam qeexan oo leh xeeladaha ugu fiican ee iOS 13 - Qaybta I | Wararka IPhone
Tilmaam qeexan oo leh xeeladaha ugu fiican ee iOS 13 - Qaybta I
Daahfurka macruufka 13 oo ah nidaam rasmi ah oo rasmi ah oo hawlgal ah ayaa marba marka ka dambaysa soo dhowaanaya. Si tartiib tartiib ah ayaan u ogaaneynaa warar badan oo dheeri ah waana kuu sheegeynaa si aad ugu diyaar garowdo daahfurka rasmiga ah ee nidaamka qalliinka ee imaan doona inta lagu jiro qeybta labaad ee bisha Sebtember ee sanadkaan 2019.
Sidaa darteed, waxaan soo saaraynaa tilmaamo taxane ah oo kuu oggolaan doona inaad si qoto dheer u ogaato sida macruufka 13 u shaqeeyo oo aan u seegin mid ka mid ah awoodahaas kaa dhigi kara inaad sida ugu badan uga faa'iideysato qalabkaaga iOS. Soo ogow dhammaan khiyaanooyinka iOS 13 oo kuu oggolaan doona inaad u maamusho iPhone-kaaga sidii inaad khabiir run ah tahay.
1 Ku xirmaan Bluetooth iyo WiFi Xarunta Xakamaynta
2 Dib u habeyso astaamaha oo ka saar barnaamijyadooda
3 Deji macruufka 13 hab mugdi ah
4 Sida gacanta loogu cusbooneysiiyo barnaamijyada ku jira iOS 13
5 Sida loo kiciyo maaraynta xamuulka smart
Ku xirmaan Bluetooth iyo WiFi Xarunta Xakamaynta
Muddo ka hor Apple waxay furtay suurtagalnimada inaan arki karno shabakadda aan toos ugu xirnayn Xarunta Xakamaynta, hase yeeshe, tani nama aysan oggolaan wax ka badan inaan si ku meelgaar ah u hawlgalino ama u joojino WiFi ama Bluetooth. Hadda Apple waxay hagaajisay aragtidan Xarunta Xakamaynta si ay uga dhigto mid waxtar badan leh. Hadda Kaliya ma awoodi doonno inaan si toos ah uga daawanno shabakadaha la heli karo Xarunta Xakamaynta, laakiin waxaan sidoo kale awoodi doonnaa inaan ku xirno midka aan doorbidno hal taabasho ah.
Tan waxaan si fudud ugu qasban nahay gee Xarunta Xakamaynta, u yeerid taabashada Haptic ama kan 3D Touch oo ah astaanta isku xirnaanta, ka dibna si isku mid ah ugu samee astaanta WiFi ama Bluetooth waxay kuxirantahay baahiyaheena. Hadda waxaan aragnaa sida liistada shabakadaha la heli karo oo dhammaystiran ay u furmayaan si aan u dooranno inaan ku xirno midka ugu habboon baahiyahayaga sabab kasta ha noqotee. Looma baahna in lagu boodboodo goobaha ficillada, tani waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu badan ee ay dalbadaan dadka isticmaala macruufka sannadihii la soo dhaafay iyadoo iOS 13 la joogo.
Dib u habeyso astaamaha oo ka saar barnaamijyadooda
Apple waxay iskudayeysaa inay iskudarsato taabashada cusub ee Haptic Touch iyo 3D Touch si saaxiibtinimo leh, sidaad ogtahayba, Haptic Touch iyo 3D Touch waxay ku kala duwanyihiin in midka hore loogu talagalay barnaamijka softiweerka iyo kan labaad, 3D Touch, wuxuu adeegsadaa qalab gaar ah si loo fuliyo cabirka cadaadiska shaashadda oo loo bixiyo natiijooyin sax ah oo dheeri ah. Imaatinka macruufka 13, isticmaalayaasha qaar waxay muujiyeen cabashooyin ku saabsan hoos u dhaca ku yimid waxqabadka 3D Touch sidaas darteedna astaamaha qaarkood ayaa loo habeeyay si ay u fududaato adeegsiga.
Hadda waxaan ku wici karnaa Haptic Touch ama 3D Touch oo ku yaal astaanta astaamaha iyo shaqada «Rearrange icons» ayaa ka soo muuqan doonta gunta miiska fekerka. Haddii aan gujino xulashadan waxaan ka badbaadineynaa inaan ku riixno waqti dheer si aan ugu baaqno shaqadan, maadaama ay badanaa khaldan tahay. Dhinaca kale, mar aan gujino "Reorganize icons" waxaan sidoo kale haysannaa suurtagalnimada in si toos ah looga tirtiro codsiyada habka ugu fudud. Tani waxay noqon doontaa xalin dhaqso ah waxayna ku dartay astaamaha oo dhan, in kasta oo tii hore u muuqatay mid caqli gal ku filan.
Deji macruufka 13 hab mugdi ah
Habka mugdiga ah ee macruufka 13 waa mid ka mid ah kuwa ugu habboon uguna baahida badan ee lagu daro adeegsadayaasha sanadihii la soo dhaafay. Xaqiiqdii Apple wuxuu go'aansaday inuu ku daro suurtagalnimada imaatinka iOS 13 mana imaan karin iyada oo aan la helin taxane taxane ah oo haddii aadan si fiican u aqoonin sida nidaamku u shaqeeyo waad tabi kartaa. Waxaan awoodi doonaa inaanu astaysto saacadaha shaqada ee qaabka mugdiga iyo inbadan.
Deji jadwalka qaabka mugdiga tooska ah: Dejinta> Muuqaal iyo Iftiin> Xullo> Caadaysnaan
Adigu gacan ku habeyn qaab mugdi ah: Xarunta Xakamaynta> 3D taabashada Nuurka> Astaanta bidix ee hoose
Calan wallpaper: Dejinta> Waraaqda> Muuqaalka mugdiga ah ayaa yaraanaya gidaarka
Kuwani waa shaqooyinka ugu caansan ee habka mugdiga cusub ee iOS 13. Waa inaan sidoo kale sheegnaa in Apple ay ku jirto macruufka 13 taxane ah oo waraaqo ah oo beddelaya midabka marka habka mugdiga la hawlgeliyo waana kuwo gaar ah. Kuwani sidoo kale waxaa laga helaa Settings> Waraaq waxaana loo soo bandhigaa sida taxane ah oo sooyaal ah oo ay ku jiraan astaanta qaabka mugdiga ah ee iOS 13 iyo muujinta horudhaca asalka labada qaab.
Sida gacanta loogu cusbooneysiiyo barnaamijyada ku jira iOS 13
IOS 13 ma ahan wax walba oo la fududeeyay, shaqooyinka qaarkood ayaa bedelay booska waxayna noqdeen kuwo aan caqli gal ahayn tan iyo markii Apple ay nagu dhiirrigelineyso inaan dhaqaajino qaababka maareynta otomaatiga ah. Xaaladdan oo kale waxaan ka hadlaynaa cusbooneysiinta barnaamijyada macruufka. Iyadoo iOS 13 hawshan ay noqotay mid aad u adag Waana iyada oo la cusbooneysiinayo naqshadda iOS App Store meesha ay ku taal qaybta cusbooneysiinta dalabka la beddelay si mudnaanta loo siiyo adeegga cusub ee Apple Arcade, laakiin ha ka welwelin.
Sidee u noqon kartaa haddii kale Actualidad iPhone waxaan ku baraynaa waxa aad sameyn laheyd si aad u cusbooneysiiso barnaamijyadaada iOS. Si tan loo sameeyo, waa inaad gashaa macruufka App Store oo guji astaanta muujineysa sawirkaaga aqoonsiga Apple ID. Markaad gudaha gasho waxaad ku arki doontaa salka hoose inaad yeelan doonto liiska codsiyada, Haddaad cusbooneysiiso kor ilaa hoose, cusboonaysiinta sugaysa ayaa soo muuqan doonta. Waad cusbooneysiin kartaa mid mid ama guji "Cusboonaysii dhammaan ..." si aad u badbaadiso naftaada hawsha gacanta. Tani waa mid ka mid ah qodobada ugu xun ee macruufka cusub ee iOS 13.
Sida loo kiciyo maaraynta xamuulka smart
Muddooyinkan dambe Apple waxay muujineysaa walaac aad u weyn oo ku saabsan waxqabadka baytariyadayada iyo xirashada iyo jeexjeexooda, tan awgeed waxaa ku jira macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan macruufka oo noo oggolaanaya inaan la soconno xirashada batteriga iyo dabcan maareynno caadooyinka isticmaalka. Iyadoo la adeegsanayo IOS 13 Apple waxay ku dartay nidaam "Optimized Charging" oo kuu oggolaanaya inaad daryeesho caafimaadka batteriga. Waxa ay ku soo oogtay khidmadani waxay xannibaysaa lacag dhan 80% meel cayiman markii dambena waxay ku dallacaysaa 100% markay u malaynayso inaanu dhakhso u jarayno sidaas awgeed, iyo waxyaabo kale, iska ilaali kulaylka sii kordhaya ee batteriga ka baxa.
Si aad udhaqaajiso hawsha "Optimized charge charge", waxa inala gudboon waa inaan tagno Settings, tag qaybta batteriga oo guji caafimaadka batteriga. Hadda qaybtaan waxaan ku arki doonnaa badhan cusub oo loogu talagalay "Optimized Battery Charging" oo ka faa'iideysan doona nidaamka aan horay u soo sheegnay.
La soco sababta oo ah toddobaadle ayaan soo saari doonnaa qaybo cusub oo ka mid ah tilmaamahan isticmaalaha ee hubaal ah si aad u ogaatid macruufka 13 qof walba kafiican kana tag qof walba afkiisa oo furan isagoo muujinaya aqoonta aad u leedahay macruufka 13. Haddii aad wax ku darsato ama aad shaki ka qabtid, ha ka fikirin, adeegso sanduuqa faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Tilmaam qeexan oo leh xeeladaha ugu fiican ee iOS 13 - Qaybta I
1Password wuxuu kaydiyaa oo soo celiyaa khasnadaha maxalliga ah ee bilaashka ah
IOS 13 waxay leedahay ogeysiisyo ka warbixinaya meelaha asalka ah